अर्थमन्त्रीकी छोरीमाथि ब’ला’त्कार, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकी छोरीमाथि ब’ला’त्कार भएको छ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष गंगाराम चनारा र उनका छोराले ब’ला’त्कार गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तीन वर्षअघि अभिभावकत्व लिएर ती बालिकालाई सिस्ने हिमाल बालगृहमा भर्ना गरेका थिए । अभिभावकत्तो ग्रहण गरेपछि छोरी मागेको अर्थ लाग्छ । गंगारामले पन्ध्र वर्षीया एक बालिकाको श्रम शोषण गरेको र उनका छोरा कुश्माखर चनारा रविले जबर्जस्तीक’रणी गरेको भन्दै पीडितले इलाका प्रहरी कार्यालय आठबीसकोटमा जाहेरी दिएकी छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय आठबीसकोट रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक कपिल शाहीले आइतबार पीडित बालिकाले जबर्जस्तीक’रणी उद्योगमा जाहेरी दिएको जानकारी दिए । कुश्माखरका बुबा गंगाराम र आमा सुनिता चनाराविरुद्ध श्रमशोषण गरेको उजुरीसमेत दिएको उनले बताए ।
पीडित बालिकाले वडाध्यक्षका छोराले पटकपटक कर’णी गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् । निवेदनमा बालिकाले दुई वर्षदेखि निरन्तर ब’ला’त्कार गरिएको र हाल पेटमा आठ दश साताको गर्भ रहेकोसमेत उल्लेख गरेको प्रहरी निरीक्षक शाहीले बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले तीन वर्षअघि अभिभावकत्व लिएर ती बालिकालाई सिस्ने हिमाल बालगृहमा भर्ना गरेका थिए । जाहेरीअनुसार २०७७ चैतको अन्तिममा लकडाउनको बहानामा बालगृह सञ्चालिका सुनिताले ती बालिकालाई आठबीसकोट १० स्थित आफ्नो घरमा लगी काममा लगाउने गरेकी थिइन् ।
वडाध्यक्षले गरेको ओखर खेतीमा पानी र बोइलर कुखुरा पालनको काममा उनलाई चारो हाल्न नियमित लगाएको जाहेरीमा उल्लेख छ । ‘कुखुरालाई चारो हाल्न खोरमा गएको मौका छोपी वडाध्यक्ष गंगाराम र सुनिताका कान्छा छोरा कुश्माकर चनारा रविले पछाडिबाट आएर मुख थुनी जबर्जस्तीक’रणी गरेर कहीँ कतै भनेमा मारिदिने धम्की दिएको हो,’ उनले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।
२०७४ मा बालगृहमा पढ्न भनेर बसेकी ती बालिका कक्षा ३ मा भर्ना भएकी थिइन् । उनीसहित बालगृहमा बसेका १२ जना अभिभावकविहीन बालबालिकालाई २०७६ मा माओवादी केन्द्रका नेता शर्माले अभिभावक बनेर विद्यालय भर्ना गरेका थिए । वडाध्यक्ष गंगाराम चनारा पनि माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित हुन् ।
यसै गरि , भक्तपुरको पुरानो थिमीमा डेरा गरी बस्ने २० वर्षकी युवतीलाई सामूहिक ब’ला’त्कार गरेको अभियोगमा एक युवा पक्राउ परेका छन् । बलात्कारमा संलग्न अन्य ४ जना फरार छन् । यी ५ जनाले यहाँ डेरा गरी बस्ने २० वर्षकी एक युवतीलाई जेठ ८ गते रातभरी सामूहिक ब’ला’त्कार गरेको आरोप छ । काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका स्थायी घर भई मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं. ६ पुरानोथिमि बस्ने बर्ष २९ को कवाङ लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पीडितले प्रहरीलाई बताएको घटना विवरणअनुसार मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं. ६ पुरानोथिमिमा बस्ने २२ वर्षका रोहित गिरीले २० वर्षकी युवतीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफ्नो कोठामा ल्याएका थिए । त्यसपछि उनले पहिले आफूले बलात्कार गरेका थिए । आफूले जबरजस्ती करणी गरिसकेपछि उनले आफ्ना अन्य ४ जना साथीलाई पनि बोलाएका थिए ।
पीडित युवतीले प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार रोहितले बलात्कार गरिसकेपछि आफूलाई कोठाबाट भाग्न नदिइ त्यहीँ थुनेर साथीहरुलाई बोलाएका थिए । रोहितका अन्य ४ जना साथीहरु पनि आएपछि सबैले पालैपालो रातभरी करणी गरेको पीडितले प्रहरीलाई बताएकी छिन् । पीडितले महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिमा भोलिपल्ट ९ गते जाहेरी दिएकी थिइन् ।
पक्राउ परेका लामा पुरानोथिमीमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा ९ गते पक्राउ गरी ११ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट दिन १० को म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ । फरार रहेका रोहित गिरी लगायतको खोजी कार्य भइरहेको समेत प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
तेस्तै गरि , अफगानिस्तानमा तालिवान लडाकुले एक प्रान्तीय सहरमा गर्भवती महिलालाई गोली हानी हत्या गरेकाे बताइएको छ। घोर प्रान्तको राजधानी फिरोजकोहमा गर्भवती महिलालाई गोली हानी ह’त्या गरिएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बानु नेगर नाम गरेकी महिलालाई गोली प्रहार गरेको हो। अफगानिस्तानमा महिलाहरूले अधिकारका लागि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरिरहँदा यो हत्याको यो खबर सार्वजनिक भएको हो। यो घटना सार्वजनिक भएपछि तालिवानको बोली र व्यवहार नमिलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
तालिवानले भने ती महिलाको मृत्युमा आफूहरूको संलग्नता नभएको बताउँदै यस विषयमा छानबिन गर्ने जनाएको छ।तालिवानका प्रवक्ता जबिल्लाह मुजाहिनले बिबिसीसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामी घटनाका विषयमा जानकार छौँ ।
म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि उनलाई तालिवानले मारेको होइन। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’ अघिल्लो सरकारका लागि काम गरेकाहरूलाई तालिवानले आममाफी दिइसकेको बताउँदै उनले महिलाको घटनामा तालिवानको संलग्नता रहेको भन्ने कुरा अस्वीकार गरका हुन्।
यसै गरि दार्चुला तुइन घटना र हेलिकप्टर प्रकरणमा भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ।
सरकारले दार्चुला तुइन प्रकरण र नेपाली आकाशमा अनाधिकृत रुपमा हेलिकोप्टर उडाइएको विषयमा भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । सरकारले ती दुई घटनाका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै कुटनीतिक नोट पठाएको हो । दुवै घटनाका सम्बन्धमा कुटनीतिक च्यानलबाट पत्र पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन् ।
साउन १५ गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन चुडाइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए । सो घटना सेलाउन नपाउँदै भारतले नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि अनाधिकृत रुपमा हेलिकोप्टर उडाएको थियो । यी दुवै घटनामा सरकार मौन रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो ।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको उपस्थितिमा दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न गत भदौ १७ गते गृहमन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीकै उपस्थितिमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ खाङ्दाङ्का जयसिंह धामी मालघाटबाट तुइन तर्ने क्रममा तारसँगै महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको थियो ।